ဇောငျးးးဆိုတာ ဖွဈသငျ့၊ဖွဈထိုကျတဲ့ ရိုကျကှကျတှကေိုပဲသုံးသပျမိတျဆကျပေးထားတာပါ။ဖွဈသငျ့၊ဖွဈနိုငျတယျလို့ညီအဈကိုတှအေားလုံးရဲ့စိတျထဲမှာ ခံစားမိမှ #ဇောငျးးးကိုစိတျကွိုကျပုံအောလိုကျပါ။#ဇောငျးးးဟာ #ဇောငျးးးပါပဲ!!!
လကျရှိ(ဘရာဇီး)ရဲ့စုဖှဲ့မူ့ကတောငျ့တငျးလှနျးနတောမို့(အာဂငျြတီးနား)ကို=-၆၅အရှုံး၊အကြောပေးမူ့က မွငျ့မားနတေယျလို့ မသတျမှတျနိုငျပါဘူးဒီပှဲစဉျအတှကျ ကြှနျတျောစိတျကွိုကျဖွဈနမေိတဲ့ရိုကျကှကျကတော့(ဂိုးအောကျ)ဇယားပါပဲ။(ဘရာဇီး~အာဂငျြတီးနား)နှဈသငျးစလုံးမှာ ပှဲအဖွကေိုအခြိနျမရှေးပွောငျးလဲပဈနိုငျတဲ့ကစားသမားတှစေုပွုံနကွေတာပါ။
လကျရှိဂိုးပေါငျးဈေးကှကျဖှငျ့လှဈမူ့အရတော့(ဂိုးအောကျ)ဘကျနထေိုငျရဲသူရှားပါးလှနျးမှာဖွဈပွီး ပွိုငျဘကျနှဈသငျးစလုံးကတိုကျစဈကစားသမားတှရေဲ့အရှိနျအဝါတှကွေောငျ့(ဂိုးပျေါ)ဇယားကိုပဲ ဖိုကျတာအမြားစုစိတျဆာနကွေမယျ့ပှဲစဉျတဈခုပါ။ဈေးကှကျခငျးကငျြးမူ့အရ(ဂိုးအောကျ)ဘကျမှာ ဖိုကျတာတှမေရှိစဖေို့ သခြောမောငျးထုတျထားတဲ့ဈေးကှကျဖွဈနသေလိုစရိုကျကိုလဲ ဆနျ့ကငျြပွီးဖှငျ့လှဈထားတဲ့ ဈေးကှကျဖွဈနတောမို့ကွောကျစရာကောငျးနပေမေယျ့(ဂိုးအောကျ)တဈပေါကျထဲစိတျကွိုကျပုံအောကွဖို့ ကြှနျတျောရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ညှနျးပေးခဲ့ခငျြပါတယျ။
ဇောင်းးးဆိုတာ ဖြစ်သင့်၊ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ရိုက်ကွက်တွေကိုပဲသုံးသပ်မိတ်ဆက်ပေးထားတာပါ။ဖြစ်သင့်၊ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ညီအစ်ကိုတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ခံစားမိမှ #ဇောင်းးးကိုစိတ်ကြိုက်ပုံအောလိုက်ပါ။#ဇောင်းးးဟာ #ဇောင်းးးပါပဲ!!!
ယနေ့ည(ကိုပါအမေရိက)ဗိုလ်လုပွဲစဉ်အဖြစ်(ဘရာဇီး)အသင်းနဲ့(အာဂျင်တီးနား)အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြပါမယ်။ဒီပွဲစဉ်အတွက်(ဘရာဇီး)အသင်းက=-၆၅အရှုံး၊အကျောပေးဖွင့်လှစ်ထားပြီးဂိုးပေါင်းဈေးကွက်ကတော့၂-၁၀အရှုံးပါ။လက်ရှိ(ဘရာဇီး)ရဲ့စုဖွဲ့မူ့ကတောင့်တင်းလွန်းနေတာမို့(အာဂျင်တီးနား)ကို=-၆၅အရှုံး၊အကျောပေးမူ့က မြင့်မားနေတယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူးဒီပွဲစဉ်အတွက် ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေမိတဲ့ရိုက်ကွက်ကတော့(ဂိုးအောက်)ဇယားပါပဲ။
(ဘရာဇီး~အာဂျင်တီးနား)နှစ်သင်းစလုံးမှာ ပွဲအဖြေကိုအချိန်မရွေးပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေ စုပြုံနေကြတာပါ။ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းစလုံးကလဲ တစ်ပွဲ(၁)ဂိုးနုန်းတော့နှပ်မှန်နေတဲ့အနေအထားတွေပါ။ဒါကိုဂိုးပေါင်းဈေးကွက်၂-၁၀အရှုံးပဲဖွင့်လှစ်ထားတာကတော့တော်တော်လေးကိုပါးလွန်းတယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။စရိုက်အရကြည့်ရင်လဲ ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ဂိုးပေါင်းဈေးကွက်ဟာ အနိမ့်ဆုံး၂-၆၀အရှုံး​လောက်ထိ ရဲရဲဖွင့်လှစ်ပေးလို့ရနေတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုပါပဲ။
လက်ရှိဂိုးပေါင်းဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်မူ့အရတော့(ဂိုးအောက်)ဘက်နေထိုင်ရဲသူရှားပါးလွန်းမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းစလုံးကတိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ့အရှိန်အဝါတွေကြောင့်(ဂိုးပေါ်)ဇယားကိုပဲ ဖိုက်တာအများစုစိတ်ဆာနေကြမယ့်ပွဲစဉ်တစ်ခုပါ။ဈေးကွက်ခင်းကျင်းမူ့အရ(ဂိုးအောက်)ဘက်မှာ ဖိုက်တာတွေမရှိစေဖို့ သေချာမောင်းထုတ်ထားတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်နေသလိုစရိုက်ကိုလဲ ဆန့်ကျင်ပြီးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဈေးကွက်ဖြစ်နေတာမို့ကြောက်စရာကောင်းနေပေမယ့်(ဂိုးအောက်)တစ်ပေါက်ထဲစိတ်ကြိုက်ပုံအောကြဖို့ ကျွန်တော်ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ညွှန်းပေးခဲ့ချင်ပါတယ်။